China Architectural Rakarukwa Mesh Rakashandiswa Kuvaka rakatanhamara Cladding fekitari uye bhizimisi | Boegger
Mapurani Akarukwa Mesh Anoshandiswa Kuvaka facade Cladding
Anoshongedza simbi pajira riya dzakarukwa kuita akasiyana akasarudzika mapatani, uye ane mabhenefiti anoshamisa akasiyana-siyana, mashoma ekugadzirisa kuvaka, kugona kwesimba uye kusimba kwezvinhu.
Mapurani Akarukwa Mesh ane Akasiyana Weave uye Maonero Mafomu
Architectural rakarukwa pajira riya anonziwo decoration dzakarukwa waya pajira riya kana rakarukwa waya pajira riya. Kazhinji, inogona kurukwa mumhando dzakasiyana dzemhando dzakasiyana. Uye rumwe rudzi rwakarukwa runogadzira waya yakarukwa pajira riya senge yekuvaka tambo mesh kana chivakwa chekutakura bhandi. Nemavara akanaka, mafashoni mapatani, mapfupi maitiro, mashandiro akanaka, yedu yekuvaka yakarukwa mesh yakagamuchirwa nevazhinji vagadziri uye mapurani anoshandiswa seyemukati nekunze kushongedza. Sekupatsanura nzvimbo, masitepisi masitepisi, kuputira madziro muchivako chemahofisi, kumashopu ezvitoro kana mamwe marongero akakosha.
Waya + tsvimbo yekushongedza mesh.
Simbi yakarukwa waya seyakapatsanura nzvimbo.
Chinyorwa: simbi isina chinhu, kwakakurudzira simbi, mhangura, ndarira, ndarira, aluminium, aluminium alloy, nezvimwe.
Yakarukwa mhando: plain kuruka, twill kuruka, dutch kuruka, bani dutch kuruka, twill dutch kuruka, yakasarudzika yakarukwa nzira, nezvimwe.
Surface kurapwa: kwakakurudzira, anodized, zingi zvemapuranga, etc.
Ruvara: chepakutanga simbi ruvara kana pfapfaidzo mune mamwe mavara.
Iyi waya mesh inogona kushandiswa kune akawanda maficha ane anotevera maficha:
Mhando dzakasiyana dzekuvhura uye saizi;
Dhizaini yakasarudzika uye kutaridzika;
Maitiro uye mashandiro.
Iine akawanda mashandiro uye aesthetic kukwidza, yakarukwa waya pajira riya yakakodzera kune akasiyana mafomu.
Basa: vaparadzanisi vemakamuri, kushongedza kwedenga, kushongedza kwemadziro, keteni remukova, firati rewindow, rolling shutter, keteni yekugezesa, skrini yemoto, kupatsanura mwenje, mabalustrade, masitepisi ekuzviparadzanisa skrini, erevheta dzimba dzemakamuri, masitendi emashopu ezvivakwa mapaneru, chivakwa chekuvaka, kuputira koromo, mapurojekiti ehumhizha, nezvimwe.
Kunyorera nzvimbo: balcony, corridor, overpass, erevheta, hotera, resitorendi, hofisi, chivakwa, huru ballroom, miziyamu, imba yemakonzati, imba yekudyira, dzimba dzekuratidzira, zvitoro zvekutengesa, kupinda kwendege, theatre, nezvimwe.
Simbi yakarukwa waya seyakakamura kamuri.
Simbi yakarukwa waya semadziro ekuvaka.
Ceiling yekushongedza waya pajira riya.
Yakaomarara mesh sechivako chechigadziko.
Simbi yakaoma mesh kuvaka kuputira.
Yakatenderera yakaoma mesh yekuvaka facade.
Architecture dzakarukwa pajira riya ivhu.
Pashure: Metal Coil Drapery yeiyo Stylish uye Inoshanda Yemukati Dhizaini
Zvadaro: Conveyor Belt Mesh Inokodzera Kuvaka Chigadziro uye Kuvhara.
Conveyor Belt Mesh Inokodzera Kuvaka Facade ...
Perforated Metal Cladding Inochengeta iyo Chivakwa fr ...
Metal Coil Drapery yeSylish uye Inoshanda Mune ...
Chain Batanidza keteni Inochengeta Inobhururuka Tupukanana Kure Bu ...